कविताः ढल्को - Everest Dainik - News from Nepal
बलराम तिमिल्सिना ‘विप्लव’
फूलजस्तै फक्रिएर खै त हाँसे ओठहरू
जस्तापाता टल्काएर रमाए खै गोठहरू !
अनि पो त नयाँ वर्ष भनी मान गर्न मिल्छ
धून धपाउँन सक्यो भने थोत्रा खोटहरू !
उही दुख उही दर्द उही सास्ती जिन्दगीमा
झुपडीलाई हियाउँदै फूर्ती गर्छन् नोटहरू !
म कसरी हाँसौं साथी कसरी रमाऊँ खै
सवै सवै विगतका पैंचो बोकी चोटहरू !
घर घर दाल भात डेलिभरी गर्छु भन्थे
ऐले सोच्छु कठैबरा खेर गए भोटहरू !
भुट मकै साँध गुन्द्रुक सार मोही चिसो
बर्गर र पिजासँग हाँस्न देऊ कोटहरू !
कहाँ आयो नयाँ वर्ष देख्दिनँ त कतै पनि
भयो हल्ला बन्द गर असतीका बोटहरू !